Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » IATA: A na-achọ ibu ụgbọ elu zuru ụwa ọnụ 9.4% na Ọktọba
International Transporttù Na-ahụ Maka Transportgbọelu Air (IATA) ewepụtara data Ọktoba 2021 maka ahịa ụgbọ elu zuru ụwa ọnụ na-egosi na ọchịchọ ahụ gara n'ihu na-adị elu karịa ọkwa ọgba aghara yana na ikike ikike ebelatala ntakịrị.
Dịka ntụnyere n'etiti nsonaazụ ọnwa 2021 na 2020 na-agbagọ site na mmetụta pụrụ iche nke COVID-19, ọ gwụla ma edepụtaghị ya, ntụnyere niile dị n'okpuru bụ Ọktoba 2019 bụ nke gbasoro usoro ihe achọrọ.
Ọchịchọ zuru ụwa ọnụ, tụrụ na ibu ibu ton-kilometer (CTKs), gbagoro 9.4% ma e jiri ya tụnyere Ọktoba 2019 (10.4% maka ọrụ mba ụwa).
Mmachi ikike ebelatala ntakịrị mana ọ ka nọ 7.2% n'okpuru ọkwa tupu COVID-19 (October 2019) (-8.0% maka ọrụ mba ụwa).
Ọnọdụ akụ na ụba na-aga n'ihu na-akwado ụgbọ elu ikuku uto mana ha dị ntakịrị adịghị ike karịa ọnwa ndị gara aga. Ekwesịrị ịdebe ọtụtụ ihe:
Nkwụsị n'agbụ ọkọnọ na nsonazụ nnyefe ebutela ogologo oge nnyefe nke ndị na-ebubata ya. Nke a na-ebutekarị ndị na-emepụta ihe na-eji ụgbọ njem ikuku, nke na-adị ngwa ngwa, iji nwetaghachi oge furu efu n'oge usoro mmepụta. Ndị na-enye ndị na-enyefe ihe n'ụwa nile oge ịzụrụ ndị na-azụ ahịa (PMI) ruru 34.8 dị ala na October; ụkpụrụ n'okpuru 50 dị mma maka ibu ikuku.
Akụkụ ndị dị mkpa nke Ọktọba PMI (iwu mbupụ ọhụrụ na mmepụta mmepụta) anọwo na-eji nwayọọ nwayọọ kemgbe ọnwa Mee mana ọ ka nọ na mpaghara mma.
Ọnụ ahịa ahịa na-ere ahịa na-adị ala tupu mmemme azụmaahịa ngwụcha afọ kacha elu dị ka ekeresimesi. Nke a dị mma maka ibu ikuku ka ndị na-emepụta na-atụgharị na ibu ikuku iji gboo mkpa ngwa ngwa.
Azụmaahịa ngwaahịa zuru ụwa ọnụ na mmepụta ụlọ ọrụ na-adị n'elu ọkwa tupu nsogbu.
Ọnụ ahịa-asọmpi nke ibu ikuku n'ihe metụtara nke mbupu akpa ka dị mma.